ဒီအစားစာေ တွက သင့်အလှတရားကိုဖျက်စီးနေကြတယ်ဆိုတာ သိပြီးပြီလား?… – Trend.com.mm
ဒီအစားစာေ တွက သင့်အလှတရားကိုဖျက်စီးနေကြတယ်ဆိုတာ သိပြီးပြီလား?…
Posted on September 7, 2019 September 2, 2019 by Shun Lei Phyo
အစားမတော်တစ်လုတ်ဆိုသလိုပါပဲ… ဒီလိုအစားစာတွေကမထင်မှတ်ပဲအရေပြားကျန်းမာရေးကိုများစွာထိခိုက်စေပါတယ်…လူတစ်ယောက်အတွက်သိပ်ကို အရေးပါလွန်းတဲ့အ ရည်ပြားကျန်းမာ ရေးကို သတိထားထားပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်သတိမ ထားမိတဲ့ အစားစာတစ်ချို့ကပဲ ကိုယ့်ရဲ့ အရည်ပြားကို များစွာထိခိုက်စေမှာပါ….ဘယ်လိုအစားစာတွေက သင့်အ ရည်ပြားကို ထိခိုက်စေနိုင်လဲ?
(၁) သကြားဓာတ်လွန်ကဲ သောမုန့်ပဲသရေစာ
(၂) အပူအစပ်လွန်ကဲ သောအစားအစာ
(၃) အချိုဓာတ်လွန်ကဲ သောသောက်စရာများ
(၄ ) အသားဓာတ်လွန်ကဲခြင်း
(၅) Coffee and Tea
အစားမတျောတဈလုတျဆိုသလိုပါပဲ… ဒီလိုအစားစာတှကေမထငျမှတျပဲအရပွေားကနျြးမာရေးကိုမြားစှာထိခိုကျစပေါတယျ…လူတဈယောကျအတှကျသိပျကို အရေးပါလှနျးတဲ့အ ရညျပွားကနျြးမာ ရေးကို သတိထားထားပေးဖို့လညျးလိုအပျပါတယျ။ တဈခါတဈလမှော ကိုယျသတိမ ထားမိတဲ့ အစားစာတဈခြို့ကပဲ ကိုယျ့ရဲ့ အရညျပွားကို မြားစှာထိခိုကျစမှောပါ….ဘယျလိုအစားစာတှေက သငျ့အ ရညျပွားကို ထိခိုကျစနေိုငျလဲ?
(၁) သကွားဓာတျလှနျကဲ သောမုနျ့ပဲသရစော
(၂) အပူအစပျလှနျကဲ သောအစားအစာ
(၃) အခြိုဓာတျလှနျကဲ သောသောကျစရာမြား
(၄ ) အသားဓာတျလှနျကဲခွငျး
ဂျပန်လူမျိုးတွေသာ ရောင်းချရဲခဲ့တဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာများ…